Zizinto ezincinci eziphucula amava omsebenzisi! | Martech Zone
NgoMvulo, Agasti 6, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Namhlanje ibilusuku lwam lokuqala kwisikhundla sam esitsha njengoMlawuli weTekhnoloji kwinkampani eselula yeNtengiso kunye ne-eCommerce apha e-Indianapolis, ebizwa Indawo yokuphumla. Njengoko ndandijonga isoftware yethu namhlanje kwaye ndincediswa kwindibaniselwano entsha, ndakhuthazeka ngokuphuhla kwesicelo. Isicelo sethu sidibanisa uku-odolwa kwi-Intanethi ngeqela POS Iinkqubo.
Ndijonge phambili ekusebenzisaneni namaqela ethu ophuhliso ukuzisa ujongano lwethu lomsebenzisi olusebenzisa ngokupheleleyo CSS kwaye, mhlawumbi, ezinye AJAX. Iindaba ezimnandi zezokuba ezi ubukhulu becala lutshintsho lwezithambiso olungayi kufuna ukukhutshwa kunye nokwakhiwa kwakhona kwesicelo. Kakhulu, ndiyakholelwa ukuba isicelo singaphuculwa ngeendlela ezimbini, okokuqala kukukwazi ukwenza unxibelelwano lomthengi kwaye okwesibini kukuphumeza 'izinto ezincinci' ezisisiseko.
Njengoko bendisebenza ePaypal phezolo, ndifumene nje 'into encinci'. Xa ulungelelwaniso lwempuku kwi-interface ye-Paypal, isixhobo esihle sokuphela kwesixhobo siyabonakala kwaye siphele xa usikhupha kwimouse kuyo. Nantsi umfanekiso weskrini:
Zizimpawu ezincinci ezinje ngale kwisoftware eyenza ukuba ibe ngamava angcono omsebenzisi. Mhlawumbi okunomdla ngakumbi kukuba abaphuhlisi be-Paypal abakhange bazikhathaze 'ngokuvuselela ivili', bafumana ilayibrari elungileyo kwaye bayisebenzisa.
Ndiza kukhangela ezi kunye nezinye iindlela kwiinyanga ezizayo ukuphucula amava omsebenzisi kwezicelo zethu.
UNick The Geek
Agasti 7, 2007 kwi-4: 09 AM
WOW, bendingenalo nofifi lwethala leencwadi le-UI likaYahoo ngumthombo ovulekileyo kwaye kwi-Sourceforge ... yenye into yokudlala entsha ekufuneka ndidlale ngayo. 🙂
Into ebendicinga ukuba yinto epholileyo yokongeza umsebenzisi mva nje kuxa benditshintshela i-Yahoo Webmail Beta entsha kwaye ndaphathwa njengesifundo esibukekayo esibukekayo esinengcebiso zesixhobo ezilungelelaniswe nento nganye ehambelanayo.
Andazi ukuba le khowudi iyinxalenye yeThala leencwadi le-YUI, kodwa ukuba kunjalo, inokuba yinto entle ukongeza kwi-app yakho ye-ecommerce.
Aug 8, 2007 ngo-7:12 PM
I-Yahoo inengqokelela enkulu yezinto ze-UI, uNick. Qiniseka ukuba ujonge ulawulo lwabo lwegridi. Iyamangalisa nje. Kwaye ekufundeni amaxwebhu abo kunye nezivumelwano zeelayisensi - konke kukho ukuze kuthathwe ukuba awukhangeli nkxaso.
Andilogqwetha, nangona… unganqwenela ukujonga kabini!